Soap manomboka amin'ny manomboka
Trano Amin'ny tananao
Androany dia tsy sarotra ny mividy savony amin'ny fitiavanao, satria ny tabilao dia mamotika tanteraka amin'ny vokatra kosmetika samihafa. Saingy ny habetsan'ny fahasalamana dia nahazoana savony - fanontaniana iray izay mampiady hevitra. Izany no mahatonga ny fanatanjahan-tena an-trano ho lasa be mpitia. Ireo izay mikasa ny hanandrana ny tenany ao amin'ity lesona mahaliana ity dia ho tonga amin'ny fanavotana ny torohevitsika.
Home savony manaova fanatontosana
Noho izany dia fanapahan-kevitra - hokolokolointsika ny savony. Inona no ilaintsika amin'izany?
Sakafo sy firaketana. Rehefa mifidy sombin-tsigara sy fitaovana ara-tsakafo hafa amin'ny savony mitapy, dia tokony hojeren'ny mpamokatra savona fa tsy voatery ampiasaina izy ireo. Toy izany koa, tsy tokony hanao fanomanana savony mifanaraka amin'ny fanomanana sakafo ianao, na mitahiry tsindrin-tsakafo manakaiky ny sakafo. Raha te hanamboatra savony ianao, dia mila fonosana misy ravin-tseranana izay hampifangaroan'ny singa rehetra, ny mixer, ny loko silikônina na ny fitaratra. Tsy tolo-bidy ny savony vy, satria ny metaly dia afaka miditra amin'ny fihetsiketsehana simika miaraka amin'ny singa savony.
Ireo singa fototra. Ny firafitry ny savony dia ahitana: alkali (soda, soda, soda, hydroxide hydroxide), siramamy (zavamaniry na biby), menaka aromatika sy ranom-boankazo (boîte de crème, rano, ronono, kafe).
Ny savony mitahiry ao an-trano dia tsy vitan'ny dingana iray mahavariana fotsiny ihany, fa koa manintona, tsy mandefitra ny korontana ary mitaky tsy maintsy fehezin'ny fitsipika momba ny fiarovana. Izany no antony, alohan'ny hanombohana asa, dia ilaina ny manomana amim-pitandremana ny toeram-piasana sy mikarakara ny fiarovana anao: mitafy akanjo mamirapiratra izay manarona ny vatany manontolo, manaisotra ny volom-borona eo am-pofoany ary mitafy fiarovan-doha. Tsarovy fa ny singa rehetra amin'ny savony dia mety hiteraka voka-dratsy tsy hay lazaina amin'ny hoditra hoditra! Rehefa avy nandalo ny dingana rehetra amin'ny fikarakarana ny savony dia ho azo antoka ho an'ny olombelona.
Famolavolana savoka ho an'ny mpandray anjara
Mba hamoronana savony vita amin'ny tanana, dia tokony hampiasa ilay antsoina hoe mangatsiaka. Ny hevi-dehibe amin'ity fomba ity dia:
Ny ranom-boasary dia atambatra miaraka amin'ny solila matevina efa voapetaka.
Ao anatin'izany fitotoana izany, dia mamindra ny vahaolana lasantsy voaomana alohan'ny fotoana isika, ary mifantoka amin'ny hoe ny tempolin 'ny constituents dia mitovy.
Ny vokatra vita amin'ny semi-vita vita amin'ny semi-finished dia nohafana tamin'ny hafanana 70-80 degre, raha tsy mitsahatra ny fifandonana amin'ny sotro iray, mandra-pahatongan'ilay antsoina hoe "lalan-dranomasina" eo amin'ny lohany.
Aorian'izany, azonao ampiana menaka aromatika, loko, akora hafa (tavoahangy fototra, ohatra, mba hananganana vokatra hosoka) ao anaty savony.
Ny famolahana indray dia indray mifangaro tanteraka, napetraka amin'ny endrika, nofonosina ary natokana mandritra ny andro.
Aorian'ny andro iray, ny savony dia azo alaina avy amin'ny baolina ary mizara ampahany, saingy efa aloha loatra ny fampiasana izany noho ny fikasany. Ny fahavononanao feno dia tokony handalo farafahakeliny iray volana, mandritra ny androm-piainan'ny savony ao amin'ny efitrano mafana ventilated.
Mba hahamora kokoa ny tenanao, ny fanombohana savoka dia tokony ampiasaina ho fototry ny savony an-tsokosoko novidina, izay manamarina ny vontoaty ambany sy ny fofona.
Sarotra amin'ny savony ho an'ny mpandray anjara
Fomba iray hafa ahafahana manolotra fanomezana savony manokana ny fanaovana sora-baventy na fanaovana sokitra amin'ny savony. Ho an'ny fanaovana sokitra amin'ny savony dia mila fitaovana manokana sy fahatsapana famoronana ianao. Ny savony ho an'ny asa sokitra dia tsy maintsy ilaina vao haingana, satria hikorontana ilay tranainy. Ny kofehin'ny sary dia tsy maintsy ampiharina eo amin'ny sisin'ny bar, ary avy eo dia tapahina amin'ny antsy manokana. Raha tsy misy fitaovana manokana atokana - tsy misy dikany izany. Azonao atao ny manapaka ny savony amin'ny kitapo tsara, ny fonosana na ny fanasan-doha.
Bookmarks avy amin'ny ribbons
Akanjo masirasira amin'ny tananao
Hazo mena amin'ny volom-borona
Ny tsipika Amerikana - kilasy maoderina
Ny fomba fanaovana tombo-kase amin'ny taratasy - fialamboly ho an'ny ankizy
Bionon'ny bio ho an'ny trano miaraka amin'ny tanany
Apple avy amin'ny fahatsapana - kilalao miaraka amin'ny tànana manokana
Fanomezana ny fampakaram-bady amin'ny tanany manokana
Ahoana ny fomba hanaovana pompons amin'ny yarn?
Sakafany savily amin'ny tanako manokana
Baozy vita amin'ny rongony vita amin'ny kofehy
Kitapom-borona - masom-borona
Andramo ny fangorahana
Top 10 mpanao politika vehivavy
Chorion teo amin'ny rindrina
Ny Hall of the Virgin
Tsy manonta printy ny mpanao pirinty - inona no tokony ataoko?
Inona no asehon'ilay firavaka?
Ny anjara asan'ny fianakaviana amin'ny fanabeazana ilay zaza
Kylie Minogue tao anaty akanjo iray mahavariana dia lasa kintan'ny filma voalohany tamin'ilay sarimihetsika hoe "Mahafinaritra ny miaina fa tsy mandà"
Alao ny masoandro
Salady ravinkazo - sakafo mahasalama sy mahasalama ho an'ny vitaminina tsotra vitamina
Guacamole avy amin'ny avocado
Enterocolitis amin'ny ankizy
Shia LaBeouf, Kristen Stewart sy ny hafa tao amin'ny premiere of the movie "American cutie"
Pankreatitis amin'ny alika